ကမ္ဘာကျော်ကားတွေရဲ့ စက်ချောဆီ အရည်အသွေးကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲ
လူသိအင်မတန်နည်းပြီး အရည်အသွေးသတ် မှတ်ချက်အမြင့်ဆုံးတွေကတော့ ကားထုတ်လုပ်သူတွေက သတ်မှတ်တဲ့ OEM(Original Equipmet Manufacturers)Standards တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ကားထုတ်လုပ်သူတွေက API ဒါမှမဟုတ် ACEA ကိုပဲ ပြန်လည်ရည်ညွှန်းကြပေမယ့် ကမ္ဘာကျော်ကား ထုတ်လုပ်သူတွေဖြစ်တဲ့ BMW? Volkswagen? Mercedes Benz? Ford စတဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးတွေကတော့ အရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက်မြင့်တဲ့ ACEA ကို အခြေခံအဖြစ်ယူပြီး ထပ်ဆောင်းအရည်အသွေးအဆင့်တွေ သတ်မှတ်ပြီး ကိုယ်ပိုင် Quality အဆင့်တွေ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် API SN နဲ့ OEM Standard တစ်ခုဖြစ်တဲ့ MB-Freigabe 229.3 ကို နှိုင်းယှဉ်အသုံးပြုကြပါတယ်။ Mercedes Benz ရဲ့ သတ်မှတ်ချက် MB-Freigabe 229.3 ဟာ API SN ထက် အရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက်များစွာပိုမြင့်ပေမယ့် လူသိအရမ်းနည်းကြပါတယ်။ အင်ဂျင်ဝိုင်အရည်အသွေးအဆင့် သတ်မှတ်ချက်တွေအထဲမှာ လက်ရှိအမြင့်ဆုံးကတော့ OEM သတ်မှတ်ချက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
OEM သတ်မှတ်ချက်တွေကို ကိုက်ညီသာလွန်တဲ့ အင်ဂျင်ဝိုင်ကို ရှာဖွေအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ကားအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ ရွေးချယ်မှုကို ရနိုင်ပါတယ်။ OEM သတ်မှတ်ချက်တွေက ဘာတွေလဲ ဘယ်လိုရှာကြမလဲ။ OEM သတ်မှတ်ချက်တွေထဲမှာဆိုရင် Mercedes Benz မှာတော့ . . .
MB-Freigabe 228.3? Touring High Tech SHPD 15W-40? MB-Freigabe 229.1? Super Leichtlauf 10W40? Diesel Leichtlauf 10W40? MB-Freigabe 229.3? Super Leichtlauf 10W40? Diesel Leichtlauf 10W40? MB-Freigabe 229.31? Top Tec 4200 5W-30? Top Tec 4100 5W-40? MB-Freigabe 229.51? Top Tec 4200 5W-30? BMW Longlife-01? BMW Longlife-04? Top Tec 4200 5W-30? Top Tec 4100 5W-40 ဆိုပြီးရှိသလို Volkswagen မှာတော့ VW 501 01? Super Leichtlauf 10W-40? VW 502 00? Top Tec 4100 5W-40? VW 504 00? Top Tec 4200 5W-30? VW 505 00? Super Leichtlauf 10W-40? Diesel Leichtlauf 10W-40? Top Tec 4100 5W-40? VW 505 01? Top Tec 4100 5W-40? VW 507 00? Top Tec 4200 5W-30 တွေရှိပါတယ်။ Porsche မှာဆိုရင် A40? Top Tec 4100 5W-40? C30? Top Tec 4200 5W-30? Renault Trucks? RD-2? Touring High Tech SHPD 15W-40? Volvo u VDS-2? Touring High Tech SHPD 15W-40? Ford u WSS-M2C 917-A? Top Tec 4100 5W-40? Ford WSS-M2C 945-A? Special Tec AA 5W-20? Ford WSS-M2C 945-B1? Special Tec AA 5W-20? Ford WSS-M2C 946-A? Special Tec AA 5W-30? Ford WSS-M2C 946-B1? Special Tec AA 5W-30? Ford WSS-M2C 947-A? Special Tec AA 0W-20? Ford WSS-M2C 947-B1? Special Tec AA 0W-20 စသဖြင့် ကားထုတ်လုပ်သူ အပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားသွားပါတယ်။ (အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အတူ ကိုက်ညီတဲ့ စက်ချောဆီတွေကို ပူးတွဲရေးပေးထားပါတယ်)
ဒီအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေထဲမှာ လိုအပ်တဲ့ အရည်အသွေးတွေကတော့ . . .
- ဓာတ်တိုး၊ ဓာတ်ပြောင်းခြင်းနဲ့ သံချေးတက်မှုကို ကာကွယ်ပေးခြင်း၊
- ပစ်စတင်တွင် ချိုး(ဂျိုး)တက်ခြင်း နည်းပါးစေခြင်း၊
- ဆီအနှစ်ကျမှု ကာကွယ်ပေးခြင်း၊
- ပွတ်တိုက်စားမှု ကာကွယ်ပေးခြင်း စတဲ့ အရည်အသွေးတွေအားလုံးကို နှိုင်းယှဉ်ပေးရပါတယ်။
ဒီအရည်အသွေး လိုအပ်ချက်အဆင့်တွေကို သတ်မှတ်ဖို့ရာအတွက် OEM တွေအများစုဟာ ACEA ရဲ့ အရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက်ကို အခြေခံအနေနဲ့ သတ်မှတ်ပြီး မိမိတို့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အင်ဂျင်ဒီဇိုင်းတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ပေါင်းထည့်ကာ သတ်မှတ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ OEM Approval တွေဟာ LIQUI MOLY အတွက် အထူးတန်ဖိုးရှိပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ မိမိကိုယ်တိုင် မိမိပစ္စည်းကို ထောက်ခံထားတာမဟုတ်ဘဲ Industry ထဲက နာမည်ရှိပြီးသူတွေက ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ ထောက်ခံပေးထားတဲ့အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေကို ကိုက်ညီကျော်လွန်ပါတယ်လို့ မိမိတို့ အင်ဂျင်ဝိုင်ကို ကြော်ငြာချင်ရင် အင်ဂျင်ဝိုင်နမူနာကို စက်ရုံပို့ပြီး ဓာတ်ခွဲခန်းသီးသန့်နဲ့ စစ်ဆေးရပါတယ်။ တစ်ခါစစ်ဆေးခဟာ Euro သိန်းဂဏန်း ကျော်တဲ့အတွက် မြန်မာငွေကျပ် သိန်းနှစ်ထောင်ကျော် အနည်းဆုံးကုန်ကျပါတယ်။ စစ်ဆေးပြီးရင် လက်မှတ်လေးတစ်ရွက်ထွက်လာပါတယ်။ အဲဒီလက်မှတ်လေးဟာ အရည်အသွေးနဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်လို့ပြောတဲ့ ထောက်ခံချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလက်မှတ်ဟာ နမူနာပေးပို့ထားတဲ့စက်ရုံနဲ့ ကုမ္ပဏီအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ကမ္ဘာလုံးက အခြားနိုင်ငံက စက်ရုံတွေအတွက် အကျုံးမဝင်ပါဘူး။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ စက်ရုံတည်ရှိရာ နိုင်ငံကွာသွားတာနဲ့အမျှ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း အရည်အသွေးတွေရယ်၊ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု၊ တင်းကျပ်မှု အတိုင်းအတာရယ် ကွာခြားသွားတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ LIQUI MOLY ရဲ့ အင်ဂျင်ဝိုင်တွေဟာ ဂျာမနီနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံတည်းမှာရှိတဲ့ စက်ရုံ (၂) ရုံကပဲ လာတာဖြစ်တဲ့အတွက် OEM Approval တွေဟာ တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိတဲ့အပြင် အရည်အသွေးကို ထိပ်ဆုံးမှာပဲ ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ OEM ကားထုတ်လုပ်သူတွေကလည်း သူတို့ Approval ပေးထားတဲ့ အင်ဂျင်ဝိုင်ကို အသုံးပြုရင် Warranty မပျက်ပါဘူးလို့ ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ ထပ်ဆင့်ထောက်ခံပေးထားပါသေးတယ်။ အင်ဂျင်ဝိုင်ပုံးပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ Approval နဲ့ Recommendation ဆိုတာလည်း အဓိပ္ပာယ်ကွဲပါတယ်။ Approval ဆိုတာ OEM စက်ရုံမှာ Euro သိန်းဂဏန်းအကုန်အကျခံစစ်ထားတာဖြစ်ပေမယ့် Recommendation ဆိုတာကတော့ မိမိကိုယ်ပိုင် ဓာတ်ခွဲခန်းကသာ ထောက်ခံချက်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Approval လို့ရေးထားရင် OEM ကထုတ်ပေးထားတဲ့ Certificate ပြနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါပြနိုင်မှသာ Approval ရှိကြောင်း သေချာပါတယ်။ EM Certificate တွေက ဥရောပကားတွေ အတွက်ပဲရှိပြီး ဂျပန်ကားတွေ၊ ကိုရီးယားကားတွေအတွက် မပါဘူးလားလို့ မေးစရာရှိပါတယ်။ အရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက်တွေဟာ Japan ကတောင်းဆိုတဲ့ SN တို့ SN Plus တို့ထက် သာလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အတွက် ဂျပန်ကားတွေ၊ Korea ကားတွေ အားလုံးအတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
လူစီးကားနဲ့ ကုန်ကားအတွက် စက်ချောဆီ အရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက်တွေမှာလည်း ကွဲပြားသွားပါတယ်။ လူစီးကားမှာ အသုံးပြုတဲ့ စက်ချောဆီ အရည်အသွေး သတ်မှတ်ချက်အတွက်ဆိုရင် API မှာ ဓာတ်ဆီသတ်မှတ်ချက် သီးသန့်သာရှိပါတယ်။ ဒီဇယ်လူစီးကားအတွက် API မှာ အရည်အသွေး သတ်မှတ်ချက်မရှိပါ။ American မှာ လူစီးကားကို ဒီဇယ်မသုံးတဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆို API CI-4 တို့ CJ-4? CK-4? FA-4 တို့ဆိုတာ ဘယ်ကားတွေ အတွက်လဲလို့ မေးစရာရှိပါတယ်။ ကုန်ကားတွေအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ လူစီးဒီဇယ်ကားတွေအတွက် မဟုတ်ပါ။ (ခြွင်းချက်အနေနဲ့ လူစီးဒီဇယ်ကားအချို့မှာ ကုန်ကားအင်ဂျင်သေးတွေ တပ်ထားတာရှိနိုင်ပါတယ်။)
လူစီးကားဒီဇယ်အတွက် စက်ချောဆီအရည် အသွေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ရှာချင်ရင်တော့ ACEA ကို အခြေခံအနေနဲ့ ရှာဖွေအသုံးပြုနိုင်ပြီး အဆင့်မြင့်သုံးချင်ရင် DPF နဲ့ပါ ကိုက်ညီတဲ့ C3 ပါဝင်တဲ့ Top Tec 4100 5W40 သို့မဟုတ် Top Tec 4200 5W30 တွေဟာ အကောင်းဆုံးရွေးချယ် မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။
CK-4 စက်ချောဆီတွေကို ဘယ်လိုကားတွေမှာ အသုံးပြုသင့်လဲ
CK-4 စက်ချောဆီတွေဟာ ၂၀၁၇ နဲ့ နောက်ပိုင်းမော်ဒယ်လ် တာဘိုဒီဇယ်အင်ဂျင်တွေ အတွက် ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ CK-4 နဲ့ CK-4 ၄ စက်ချောဆီတွေကို သုံးမယ်ဆိုရင် မိမိအသုံးပြုတဲ့ ဒီဇယ်ထဲမှာ Sulphur ပါဝင်မှု 500 ppm သာ အများဆုံးရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ CK-4 ဆီကို 15 ppm ထက် ပိုတဲ့ (လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံက ဒီဇယ်များအားလုံး)ဒီဇယ်ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် Owner’s Manual ထဲမှာ ခွင့်ပြုထား မထား ပြန်ကြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခွင့်ပြုထားမှသာ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ FA-4 ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဇယ်ထဲမှာ Sulphur ပါဝင်မှု 15 ppm အထိသာ အများဆုံး ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက ဒီဇယ်အားလုံး လက်ရှိအနေအထားမှာ 15 ppm အောက်ရောက်တာ မတွေ့မိပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် FA-4 ဟာ နောက်ဆုံးထုတ် ဖြစ်ပေမယ့် သင့်ကားအတွက် အကောင်းဆုံးမဟုတ်သေးတာကို သတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အရည်အသွေးချည်းပဲလားဆိုတော့လည်း အရေးအကြီးဆုံးတစ်ခုကျန်ပါသေးတယ်။ Customer တွေရဲ့ ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ကားတွေ အများဆုံးထုတ်လုပ်ရာ ဂျာမနီနိုင်ငံက ကားပိုင်ရှင်တွေဟာ အင်ဂျင်ဝိုင်ကိုလည်း အရည်အသွေး အကောင်းဆုံးမှလွဲ၍ အခြားရွေးချယ်သုံးစွဲမှာ မဟုတ်တာတော့ သေချာပါတယ်။ LIQUI MOLY ဂျာမနီနိုင်ငံက ကားပိုင်ရှင် (၈) သန်းကျော်ရဲ့ အကောင်းဆုံးအင်ဂျင်ဝိုင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံရတာ ၂၀၁၉ မှာ (၁၀) နှစ်ဆက်တိုက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဂျာမနီက ကားပိုင်ရှင်တွေအတွက် ထုတ်ပေးထားတဲ့ အင်ဂျင်ဝိုင်နဲ့ မြန်မာပြည်က အမျိုးတွေအတွက် လက်ဝယ်ပို့ ပေးနေတဲ့ စက်ချောဆီတွေဟာ ပစ္စည်းအတူတူ စက်ရုံတစ်ခုထဲက ထုတ်ပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျာမနီက တိုက်ရိုက်တင်သွင်းပေးထားတာဖြစ်ပေမယ့် စင်ကာပူထုတ်၊ မလေးရှားထုတ်၊ ထိုင်းထုတ်စက် ချောဆီတွေထက် ထူးထွေပြီး ဈေးနှုန်းအဆမတန်ကြီးနေတာ မဟုတ်တာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
LIQUI MOLY စက်ချောဆီတွေအားလုံးဟာ
(၁) ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကားတွေထုတ်လုပ်ရာ ဂျာမနီတစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ အကောင်းဆုံးစက်ချောဆီဖြစ်ပြီး ဂျာမနီမှ တိုက်ရိုက်တင်သွင်းထားခြင်း၊
(၂) ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ ၂၀၀ နီးပါးထဲက နိုင်ငံပေါင်း ၁၅၀ ကျော်မှာ အသုံးပြုနေတဲ့ နိုင်ငံတကာ အမှတ် တံဆိပ်စစ်စစ်ဖြစ်ခြင်း၊
(၃) OEM Approval တွေဟာ တိုက်ရိုက်အကျုံးဝင်ခြင်း၊
(၄) ဂျာမနီထုတ် Original စစ်စစ်ဖြစ်ပေမယ့် ဈေးနှုန်းတွေလည်း ဒေသတွင်းစက်ရုံထုတ် စက်ချောဆီများထက် အဆများစွာ ပိုကြီးမနေခြင်း၊
(၅) ဂျာမနီရဲ့ တောင်းဆိုချက်အမြင့်ဆုံး ကားပိုင်ရှင်တွေက နှစ်စဉ် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်ခံရတဲ့ တစ်ခုတည်းသော စက်ချောဆီဖြစ်ခြင်း၊
(၆) စက်ချောဆီ Additives? Service Products အမျိုးပေါင်း လေးထောင်ကျော်ရှိတဲ့အတွက် ကားအတွက် လိုသမျှ Fluid အားလုံး ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ တံဆိပ်တစ်ခုထဲက အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးတွေချည်းသာ ရရှိနိုင်စေခြင်းစတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကြောင့် အသုံးပြုသူတွေရဲ့ စီးတော်ယာဉ်လေးအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတွေကတော့ အဆင့်မြင့်စက်ချောဆီတွေကို ဘယ်လိုထုတ်လုပ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဂျာမနီနိုင်ငံထုတ် LIQUI MOLY က ထုတ်တဲ့ဆီတွေကို ဥပမာ ပေးပြီးပြောပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး 5W-30 နဲ့ 10W-40 စတဲ့ စေးပျစ်အားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးလည်း ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Reference - LIQUI MOLY Myanmar